राष्ट्रपतिलाइ मनिकाले चढाइन् यस्तो बिन्तिपत्र — Samyantra.com
गृहपृष्ठ » प्रवास, बिचार → राष्ट्रपतिलाइ मनिकाले चढाइन् यस्तो बिन्तिपत्र
November 15, 2017१३१० पटक
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी यतिबेला युएई भ्रमणमा हुनुहुन्छ । वहाँ अबुधाबीका राजकुमार तथा युएई शैनिकका नायब सर्वोच्च कमान्डर शेख महम्मद बिन जाहेद अल नेह्यानको मैत्रीपुर्ण निमन्त्रणामा गत नोभेम्बर १३ देखि १७ सम्मको औपचारिक भ्रमणका लागि युएई आउनु भएको हो । यसै शिलशिलामा अबुधाबीमा कार्यरत नेपाली चेलि मनिका नगरकोटीले वहाँलाई एक बिन्तिपत्र लेख्नु भएको छ :
१५ नोभेम्बर २०१७
सम्मानिय राष्ट्रपति महोदय ,
सर्वप्रथम त युएईमा हजुरलाई स्वागत छ , म अनि म जस्ता ४ लाख अभागी नेपालीहरुको तर्फबाट । हजुर युएई आउनु भएको छ भन्ने खबर निकै ढिलो गरि मात्रै थाहा पाएँ । त्यो पनि सेतोपाटीमा समाचार पढेर । हजुर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने गाँईगुँई त सुनेको थिएँ तर जिम्मेवार निकाय (दूतावास) बाट कुनै सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक गरिएको थिएन । म जस्तो १२ घण्टा मालिकको सेवा गरेर थकान शरिर लिएर कोठामा फर्किनेलाई अरु कुन माध्यमबाट जानकारी प्राप्त होस र ?
दूतावासको फेसबुक पेजमा आयो भने वा समाचार छापियो भने मात्रै हो थाहा पाउने न हो । खैर , ढिलै गरि भएपनी थाहा पाएँ , खुसिले भुइँमा खुट्टा छैन । कम्तीमा अरुले सुनेर पनि नसुने झैं गरि उडाएका हाम्रा दु:ख र पीडा हजुरले त सुन्ने हुने भो , देख्नु हुने भयो । धेरै आशा र भरोसा छ , हजुरप्रति म अनि म जस्ता ४ लाख श्रमिक नेपालीहरुको । यो भरोसा तोड्नु हुन्न भन्ने दृढ विश्वास गरेकी छु । किनकी हजुर हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ , गार्जेन हुनुहुन्छ । अभिभावकले सदैव आफ्नो सन्तानको सुख र खुसी चाहन्छन भन्ने शाश्वत सत्य हो । त्यसैले यो चिठी मार्फत मनका केही कुरा लेख्दैछु , यहाँका नेपालीहरुको सुखदुःख सुनाउँदैछु । यो चिट्ठीलाई रद्दिको टोकरीमा नखसाल्नुस है , बिन्ती छ ।
म मनिका नगरकोटी , घर बुटवल । अबुधाबी आएको ४ वर्ष भयो । आएदेखी नै १२ घण्टे डिउटीमा जोतिएकी छु । महिना दिनमा मुस्किलले २ वटा बिदा मिल्छ , त्यो पनि यताउता गर्दा नै बित्छ । तर पनि यो बिचमा साथीभाइ , संचारमाध्यम र सामाजिक संजाल मार्फत युएईका नेपालीहरुको सुखदुःखसंग नजिकिने , चिन्ने र बुझ्ने कोसिस गरिरहेकी हुन्छ । त्यसैको आधारमा यो पत्र लेख्दैछु ।
राष्ट्रपति महोदय ,
युएईमा मात्रै म जस्ता करिब ५० हजार नेपाली दिदिबहिनीहरु हुनुहुन्छ । ती मध्ये झण्डै १० हजार घरेलुु कामदार हुनुहुन्छ । २० हजार जति क्लिनर , ५ हजार जति विभिन्न सपिङ सेन्टरहरुमा , अनि ब्युटी पार्लर , अन्य कम्पनी तथा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आफ्नो र परिवारको जिविकोपार्जन गराईरहनु भएको छ । हरेकको आआफ्नै समस्या छ , बाध्यता छ , पीडा छ अनि छुट्टै कथा छ । तर आजसम्म उनीहरुको त्यो बाध्यता बुझ्ने , पिडादायी कथा सुन्ने अनि आहतमा राहतको मलहम लगाउने कोहि आएनन । वर्षमा सरकारी प्रतिनिधिहरुको भ्रमण मात्रै कम्तीमा ६/७ पटक हुने गर्दछ । आफ्नै दूतावास छ , तर अहँ कसैले बुझ्दैन म जस्ता ५० हजार नेपाली चेलीको व्यथा । आपत परेर फोन गर्दा जिम्मेवार कर्मचारीको फोन उठ्दैन । यस्तै यस्तै छ यहाँ राष्ट्रपती ज्यु !!!
यहाँ दिनहुँ नेपाली दिदीबहिनीहरु बेचिएको खबर सुनिन्छ । दलालले सोझासिधा नेपाली दिदिबहिनीहरुलाई फकाएर , लोभ देखाएर भिजिट भिजामा ल्याउँछन अनि १५ हजार दिराममा बेची दिन्छन् । हाम्रो मूल्य यत्ती नै हो त ? त्यसरी बेचिएका र पीडित बनेका नेपाली दिदीबहिनीको कथा व्यथा छाप्ने पत्रकार साथीहरुको दवाबमा दुतावासले त्यस्ता दलालहरुको नाम त सार्वजनिक गर्छ तर समातेर कार्वाही गर्ने साहस कसैले गर्दैनन् । अझै समाजका कलंकहरु खुलमखुल्ला हिंडिरहेका छन् । नेपाली चेलिहरु ओसारिरहेका छन् । दुबईलाई ट्रान्जिट बनाएर ओमन , कुवेत , इराक हुँदै लेबनान सम्म नेपाली चेलीहरु बेची रहेका छन् । यहाँ यस्तै छ राष्ट्रपति ज्यु !!!
सम्मानिय राष्ट्रपती ज्यु ,
मैले अघि पनि भनें यहाँ करिब १० हजार नेपाली दिदिबहिनीहरु घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वहाँहरुको खटाई नियमित १२ देखि १८ घण्टासम्म हुने गर्दछ । वर्षौदेखि काम गरिरहनु भएको छ । घर गएर आउँछु भन्दाभन्दै ९ महिना अघि हाम्रो सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गरिदियो । बाध्यताले अर्काको घर सफा गर्ने , भाँडा माझ्ने , बच्चाबच्ची स्याहर्ने दिदीबहिनीको बाटो बन्द गरिदिएको छ । घर गए पनि फर्किन आउन नपाउने स्थिती सिर्जना गराईदिएको छ । घरमा आपतविपत पर्दा समेत चाहँदाचाहँदै पनि घर जान पाईरहेका छैनन । यस्ता हजारौं नेपाली दिदीबहिनिहरु हुनुहुन्छ । मेरो विनम्र आग्रह , कृपया यी अबोध नेपाली दिदीबहिनीलाई सजिलै घर जाने आउने बाटो खुलाई दिनुस ।
विदेशिएका जति नेपाली दाजुभाई , दिदिबहिनी हुनुहुन्छ वहाँहरु सबै रहरले नभई बाध्यताले विदेशीनु भएको हो । यो कुरा हजुरले पनि राम्ररी बुझ्नु भएको छ । त्यसैले मेरो आग्रह , नेपालीहरु कोहि पनि विदेशीनु नपर्ने वातावरण बनाईदिनुस । देशभित्र स्थायी शान्ती , अवसर र रोजगारको सिर्जना गर्ने कोसिस गरिदिनुहोस । यस्तो स्थिति बनेमा हामी तुरुन्तै स्वदेश फर्किन्छौ , यहाँको ५० डिग्री तापक्रममा पाक्ने हाम्रो रहर होईन ।
राष्ट्रपति ज्यु , विदेशी मालिकको नुन खाएकि छु । नुनको सोझो त गर्नै पर्‍यो । बाङ्गिएर दायाँबायाँ गर्नसाथ जागिर देखि निकालिदेला भन्ने पिरलो छ । त्यसैले हजुरलाई भेट्न आउन सकिन , त्यसैले यो चिट्ठी लेखेकी छु । विश्वास छ , हजुर सम्म पक्कै पुग्नेछ । फेरि पनि बिन्ती गर्छु , यसलाई रद्दिको टोकरीमा नखसाल्दिनु होला । यो म जस्ता हजारौं नेपालीको पीडा हो , वेदना हो । अरु कसैले सुनेनन त्यही भएर हजुरकहाँ चढाउँदैछु । बिन्ति , यसलाई गम्भीरतापुर्वक लिईदिनु होला । हस्त ,अहिलेलाई बिदा लिन्छु । धन्यवाद , नमस्कार !!!
बुटवल , हाल अबुधाबी
दिनाङ्क – १५ नोभेम्बर २०१७